XUQUUQDA AAD KU SAABSAN YAHAY iyo ARSADAHA GUUD ee VIETNAM - Qaybta 2 - Dhulka Barakaysan ee Daraasadaha Vietnam
1974 Views 0 Comments Nguyen Manh Hung
Dugsiyada & Shuruucda Farshaxanka
Farshaxanka fiyatnaam of Vietnam si rasmi ah loo soo saaray iskuulada fanka dagaalka in xukun feudal.
Sidaa darteed, haddii suugaanta ay hore ugu lahaan jirtay maxkamadda boqortooyada, fanka legdinta sidoo kale waxaa lagu sameeyay isbarbar dhig taariikhda Vietnam ee dagaalka iyo nabadda. Dagaalladu si isdaba joog ah ayey u dhacayeen fanka legdintaana guulo ayuu lahaa. Mararka qaarkood, xitaa mandarins-ka fanka dagaalka ayaa beddeli kara hay'adda boqortooyada. Tran Quoc Tuan lagu sharfay sida Hung Dao Vuong. Wuxuu ahaa Mandarin faneed faneed kaliya maahan Vietnam laakiin sidoo kale adduunka. Waxaa loo aqoonsan yahay sida a duur joog oo baabi'iyay hamiga xukunkii adduunka boqortooyadii Mongolia. Dagaalyahannada tan Boqortooyada Mongolian fadhiisan kara oo ku seexan kara faraska inta lagu jiro duulaanka, sida soo duulayaasha gaashaaman. Dagaalyahannadii waxay keeneen riyadii ahayd Genghis Khan's, kaas oo ahaa “Qorraxdu ku dhacdo jilbihiisa hoostooda"Markii ay gaari karayaan safka fardahooda xoogga badan.
Qaacidada kibirka sida kor ku xusan waxaa la soo saaray taariikhda hore ee aadanaha, sida Boqortooyada Roomaanka, ama ka badbaaday boqortooyadiisa taariikhda casriga iyo ta casriga ah, Boqortooyada Nazi, taas oo taariikhda Vietnam ay soo martay.
Beeraha bariiska iyo tuulooyinka ka baxsan, halkaas oo ruuxa dagaallamaya loo shiday fallaagada ka dhanka ah gardarada shisheeye, waxaa jiray dad badan geesiyaal wadaniyiin ah. Waxaan u baahanahay inaan sheegno dariiqo kaladuwan oo aan ku biirineyno wax ku ool ah dhismaha dalka gudahiisa ee nidaamka siyaasadeed ee falsafadda Orient.
Aynu u kala jeexno muddada taariikhiga ah Dawladii Nguyen. Farshaxanka dagaal ee Fiyatnaamiis ayaa gashay a Nidaamka tababarka rasmiga ah iyadoo dhacdooyin badan ay ka dhacayaan Sayid Trinh Cuong erey.
- A dugsiga fanka dagaalka ayaa laga furay 1721 (the sanadkii labaad ee Bao Thai, Le Trung Hung era) iyo loo magacaabay giao thu (cufnaan oo mas'uul ka ah waxbarashada magaalada).
- Waxaa jiray imtixaannada fanka dagaallada ee 1723 (4th sanadka Bao Thai) oo waxaa la qabtay saddexdii sanoba mar (la mid ah imtixaannada suugaanta).
Si ka duwan bulshada warshadaha maanta, Bulshada feeraha bariga ee wakhtigii hore may hirgalin isdiiwaangalinta sanadlaha ah laakiin sadexdii sanaba hal mar oo leh sanado kaladuwan suugaanta iyo fanka dagaalka. Wixii fanka legdinta, Imtixaanada waxaa loo abaabulay sidan soo socota:
1. Thi Markaa cu (Baadhitaanka Shaqaalaysiinta Deegaanka): Waxaa laga abaabulay magaalooyinka deegaanka sanadihii mouse, Faras, Bisad, Digaag. Kuwii ka gudbay ayaa heli lahaa Tao si diblooma ah (oo la mid ah heerka koowaad ee bachelor).
2. Thi Bac cu (Baadhitaanka Shaqaalaysiinta Weyn): Waxaa loo agaasimey caasimada si loo shaqaaleeyo Tao si (la mid ah dhakhtar) sannadihii Dragon, Dog, Buffalo, Ri. Sannadkii ugu horreeyay wuxuu ahaa sanadkii Goat, 1724, oo ku yaal Thinh Quang qaybtaas oo ay ka koobnaayeen kow iyo toban qof oo loo maleynayo inay yihiin.
Intii lagu jiray 69 sano ee Le Trung Hung erayada, waxaa jiray sagaal iyo toban imtixaan oo ay la socdaan 199 tao si, oo ay ka mid ahaayeen 59 tao si xuat marka loo eego (oo leh asalka fanka) iyo 140 dong tao si xuat marka loo eego (la mid ah asalka fanka dagaalka).
Inta lagu guda jiro Nguyen qoyskii, ka 18th sanadkii of Minh Mang (1837), waxaa jiray sharci cusub.
Amiirka ku dhawaaqay in "ilaa iyo imtaxaanada fanka legdinta ma leh sharciyo weli.Sidaa darteed, boqorku wuxuu dejiyey shuruucda tartamada, kuwaas oo weli ku jiray sharciyada Rabbiga Le boqortooyadii.
Tartannada waxaa loogu talagalay dadka leh farshaxanka halyeeyada iyo xirmooyinka aasaaska milatari. Tartannada waxaa la qabtay saddexdii sanoba mar iyada oo loo marayo imtixaannada fanka ee halyeeyada oo lagu magacaabay imtixaannada suugaanta: Thi huong (imtixaanka gobolka) sanadihii Tiger, Daanyeer, Masag, Doofaar; iyo ku xidhan hi (baaritaanka magaalooyinka waaweyn) sannadihii Jinni, Ey, Buffalo, Ri.
Gaar ahaan, 6-aadth sanadka ee Thieu Tri erayada (1846), amiirka ayaa oggol mid khoa (Baaritaan raalli gaar ah) loo yaqaan Khoa thi Vo kinh (Imtixaannada Classic militari) ee murashaxiinta 31 gobol. Waxay la mid ahayd suugaanta iyo Diin (baaritaanka maxkamadaha).
Waxaa jiray hal farqiga u dhexeeya Nguyen boqortooyadii ka Le qoyskii, taas oo ahayd maqnaanshaha imtixaanka aragtida (Classics militari) iyo diiradda kaliya ee farsamooyinka fanka dagaalka. Waxaa laga yaabaa in markaa wixii ka dambeeyay, fanka fiyatnaam ay soo qaadday 'rabshadda' maskaxda maskaxda.
Dhammaan musharixiinta waa iney maraan seddex baaritaan oo isku xig xiga: Baadhitaankii ugu horreeyay wuxuu ahaa culeys. Imtixaankii labaad wuxuu ahaa adeegsiga shaqaalaha, gaashaanka, iyo qabashada foomamka fanka dagaalka. Baadhitaanka saddexaad wuxuu ahaa isticmaalka muruqyada
Imtixaanka saddexaad waa baaritaanka ugu dambeeya ee kuwa aan gudbi karin labada koowaad. Inta badan musharraxiintu ma garaacin karin bartilmaameedka sababtoo ah muruqyada ayaa la mamnuucay halka kuwa saboolka ah ee ku nool tuulooyinka yar-yar aan lahayn dariiqyo toogasho oo habboon oo ay ku dhaqmaan.
Xagga sare waxaa fadhiga koowaad ee imtixaanka fanka fanka martigelinta ah Nguyen guri ammaan, kaas oo lagu qabtay caasimada si loo gudoonsiiyo vo cu nhan shahaado (bachelor fanka). Sanadkii 1848, kii sanadka ugu horeeya ee Tu Duc, xeerarkii baaritaanka ayaa la beddelay. Musharixiinta ma aysan soo xaadirin dhamaan seddexda imtixaan ee isku xigxiga laakiin midkastaaba. Haddii ay ku guuldaraysteen mid ka mid ah saddexda, looma oggolaanin in mar kale lagu tijaabiyo qaybaha kale.
In ka sanadkii saddexaad ee Tu Duc (1850), nidaamyadii baaritaanka mar labaad ayaa la beddelay. Murashaxiinta ayaa ka qeybgalay labadii imtixaan ee ugu horreeyay si isku xigxig ah. Haddii ay heleen dhibco badan, waxaa loo oggolaaday inay qaataan baaritaanka saddexaad ka dibna loo tixgeliyaa gudbin. Sanadka soo socda ee Tu Duc (1851), amiirka ayaa dhigay labo baaritaan, Vo hoi thi iyo Vo dien thi, ka dibna iyo Diin. Haddii musharixiintu lahaayeen aqoonta farshaxanka fanka, way diiwaan gelin karaan cu nhan vo (imtixaanka shahaada ee bachelor). Hadday yihiin kuwa aan qorin waxna qorin waxna akhriyin imtixaanka aragtida, waa la qaddariyo kaalinta labaad kaliya. Haddii la diiwaangaliyo, murashaxiinta waxay yeelan doonaan a tijaabo afka ah la shan su'aalood on Afarta buugaag, Cilmiga Ciidamada iyo buugaagta jeneraalada caanka ah ee waagii hore iyo hada. Hadday si hufan uga jawaabi karaan, waa loo oggolaanayaa inay qaataan iyo dinh. Abaalmarinta musharraxiintaasi waxay ahaayeen dien yen yen (fadliga boqorka) oo loo oggolaaday faras vinh quy bai to (ku soo noqoshada guriga si aad ugu mahadceliso awoowayaasha kadib markii ay ku guuleysteen abaalmarinno waxbarasho) (Jaantuska 4), oo lamid ah suugaanta iyo dinh. Waxa jiray sawir Henri Oger sannadihii 1908-1909 oo sharraxaya dhakhtar ku habboon daaweynta muddadii lagu jiray. Nguyen Dawladnimo. Halkan, sawirku ma muujinayo sawirka “Ngựa ông đi trước, võng nường theo sau"(aroosad da 'yar ayaa fuushanaa dhul baaxad leh oo ninkeeda faras ku hor jooga).
Waxaan ognahay muuqaalka dhakhaatiirta dib ugu laabashada guriga horaantii qarnigii, markii adduunka Shiinaha bilaabay inuu hoos u dhaco sidaa darteed waxaa la siiyay oo keliya calanka, boodhka, faras, iyo parasol.
Aagga baaristu waxay ahayd dhul banaan, oo ay ku hareereysan yihiin xaynjirta bamboo; waxaa jiray guryo waardiyayaal oo leh afarta gees; bannaanka waxaa ka jiray ulo adag oo af badan si looga hortago kuwa wax gala.
Aagga baaritaanka waxaa loo qeybiyay afar qaybood oo waaweyn oo loo yaqaan vi (aag hoosaad) leh afar magac oo xirfado kala duwan: tri, digo, tai, luc [trí, dũng, tài, lực] (xigmad, geesinimo, geesinimo, xoog). Hoy kasta wuxuu hor yaallay buul saddex mitir leh oo qoryaha sita. Guryaha ilaalada waxay leeyihiin balakoonno si ay u eegaan aagagga imtixaanka oo dhan. Hoos waxaa ku yaal guryo ay murashaxiinta ku nastaan. Annagu wali ma aragno sawirka aqal-hoosaadka imtixaanada fanka halgan hase yeeshee H. Oger wuxuu na tusay teendhadii imtixaanka ee suugaanta (Jaantus 5).
Ugu dambeyn, iyo huong [iyo hương] (imtixaanka gobolka) waxaa loo qabtay si loo xusho tiro ku filan oo bachelor art Arts ah.
Si kastaba ha noqotee, dhawr musharrax ayaa u diiwaangashan tao si [tạo sĩ] cinwaan sidaa darteed amiirkii ma qaban karin iyo hoi [iyo hội] (baaritaanka magaalooyinka waaweyn). Sidaa darteed, imtixaanka waxaa lagu qabtay caasimadda cado [Huu] kaliya. Intaa waxaa sii dheer, ma jirin garsoorayaal ku filan oo ilaaliya imtixaannada. Sidoo kale, qaar kamid ah waxay lahaayeen ruux diimeed. Taasi waxay ahayd sababta Tao si [Tạo sĩ] imtixaanku wuxuu u ahaa oo keliya farcanka boqortooyada. Gudaha Binh Dinh [Bình Đšh] iyo Hanoi [Hà Nội], ma jirin liistada tao si [tạo sĩ].
Tan iyo markaas, hoiyo lama qaban karin. Binh Dinh [Bình Đšh] wuxuu caan ku noqday cinwaanka dugsiga fanka dagaalka ee cu nhan [cử nhân], tao si [tạo sĩ].
Thi hoi [Thi hội] waxay la mid ahayd iyo huong [iyo hươnglaakiin leh culeysyo kaladuwan, 66 kiilo oo soddon ah iyo 72 kiiloogaraam ah iyo hoi [iyo hội]. Ka sokow, masaafada culeyska ee hu huong wuxuu ahaa 64 mitir iyo 80 mitir iyo hoi [iyo hội].
… LA SOCO…
(Booqday jeer 1,176, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 1,967
← LUUQADAHA HADALKA iyo ARRIMAHA GUUD EE VIETNAM - Qaybta 1
LIISKA DIIWAANADA DIIWAANGALINTA qaybaha - Holylandvietnamstudies.com →
Booqashada Maanta: 217
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,138
Guud ahaan Wadarta: 286,033